အချက်များစွာဖြင့်.. | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
စိတ်မပျက်နဲ့ အမရေ။ လင်းလဲဒီလိုဘဲ ဟိုစမ်း ဒီစမ်း စမ်းသပ်ရင်း တူးတာတူး ပျော့တာပျော့ အဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါ မဆိုးဘူးအဆင့်( ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေးထားတာ) တော့ရောက်နေပြီ။ လင်းကတော့ မလုလုမီးဖိုချောင်တို့ ရှင်မင်းတို့ဆီကနေ သွားဖတ်ပြီးချက်တယ်။
ဟီးဟီး အမအမျိုးသားက မချက်စေချင်ရင် မချက်နဲ့လေ စာပိုရေးဖို့ အချိန်ရတာပေါ့။ ပရိသာတ်တွေ အကြိုက် တနေ့ ကို တပုဒ်မကတင်ပါလား ။ လာရကျိုးနပ်အောင်လေ။
(ဒီတခါတော့ ပထမဆုံး ကွန်မင့်ပေးသူဖြစ်သွားပြီ)
hey Cho Thiinn
Very nice and cool post, I love it. keep it up
Buldozer ကြီးလေ၊ သင်္ဘောပေါ် ဟင်းချက်တာ။
စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်ရဲ့ ၉နှစ်ပြည့် အထိမ်းမှတ်
နှစ် ၂၀ ပွဲမှ မမိုးချို ရဲ့ လက်ရာလေးကို ၀င်မြည်းဖို့ အချိန်
မထူးပါဘူးဗျာ..ထုံးစံအတိုင်းပဲ ထမင်းသိုး ဟင်းသိုးပဲ..
၀င်လွှေးလိုက်တာပေါ့ ၊ လက်ရာတော့ မပျက်သေးပါဘူး
လက်ဖက်ရေကြမ်းပူပူနဲ့ဆိုလိုက်မှာလိုက်ပဲ.. ဟဲ ဟဲ
တူတူပါပဲ အမရဲ့... စားဖို့ပဲ ၀ါသနာပါတာ..
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ချက်မှ စားရမှာဆိုတော့ ဒီလိုပဲ ဖုန်းတလုံးနဲ့ ဟိုမေးဒီစမ်းချက်ရတာပါ.. တခါလေ လုလုဆီက နည်းပေါ့.. ဟဲဟဲ..
အခုတော့ .. အင်း.. စားလို့အိုကေပီလိူ့ ထင်ပါတယ်။
မ ရေ… ဟင်းကလဲ talent ရှိမှဆိုပဲ… အိမ်က အမျိုးသားပြောတာပါ… ကျွန်မလဲ အဲဒီဘက်မှာ talent သိပ်တော့မရှိဘူး… စားဖြစ်ရုံလောက်ပဲ… သူများတွေများ အသုပ်ကလေး ခပ်ကြမ်းကြမ်းသုပ်လိုက်တာတောင် ဆွေမျိုးမေ့တယ်… သတိထားမိတာက ကျွန်မတို့ အညာသူတွေ အောက်ပြည်အောက်ရွာကသူတွေ လောက်ဟင်းချက် မကောင်းတာပဲ… ကိုယ်အိမ်ထောင်ပြုမိတဲ့သူက အောက်ပြည်အောက်ရွာကဆိုတော့ ဒုက္ခကိုရောက်ရော… အမေက ဘယ်လိုချက်တာဆိုတာက စတာပဲ… အားတော့ မလျှော့နဲ့ မ ရေ… တဖြေးဖြေးနဲ့ ကိုယ့်လက်ရာနဲ့အသားကျလာပြီး တခြားလက်ရာတွေတောင် လျှာမတွေ့ ဖြစ်သွားမယ်…
(ဘိတ်ဆုံးဆိုတဲ့ အသုံးအနှူန်းလေးကိုတွေ့ တော့ ပြုံးမိတယ်… အညာသူဆိုတာ သက်သေပြနေတာလေ… ဆရာမခင်ခင်ထူးဆီမှာလဲ အဲလို မြင်းခြံ၊တောင်သာ၊နွားထိုးကြီးလေသံလေးတွေ တွေ့ ရတယ်… ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်အသုံးမို့နားထောင်လို့ ကောင်းတာ အမှန်ပဲ)
အမရေ.. စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ပါရမီဆိုတာ လိုင်းကား.. အဲ…ဟုတ်ပါဘူး… လေ့ကျင့်ရင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် အရင်က ဟင်မချက်ဖူးဘူး၊ အပြင်ရောက်လာတော့ အမေချက်တာစားချင်တော့ အမေ့ကိုမေးပြီး မေးစမ်းချက်တာ၊ တော်တော်ဟုတ်နေပြီ။ အညာချက်တွေချက်တာလေ၊ အမလည်း စားချင်ရင်ပြော နည်းပေးမယ်။ အဲ အကိုကတော့ မျက်ခုံးလှုပ်နေလောက်ပြီ :P….
ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းချက်တတ်တာကတော့ အညာပဲကြီးနှပ်…
ဘလော့ဂ်ဂါကြီး တယ်ဟုတ်နေပါလား ..
သတိထားမိတာက ချိုသင်းဘလော့ဂ်က အပြင်အဆင်အနည်းဆုံး ဘလော့ဂ် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ ကိုယ့် လက်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိပုံရတယ် :P
ဘာရေးရေး ဖတ်လို့ ကောင်းနေတာပါဘဲ...
အမ ရေးသမျှ မျက်စိထဲမှာ မြင်ကြည့်လို့ရပြီး အကုန်ဖတ်လို့ ကောင်းနေတာပဲ။ ဟင်းမချက်တတ်တာတော့ အစ်မတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာလည်း မြန်မာပြည်က ပါလာတဲ့ ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်တွေကို ခုထိ ချက်တိုင်း ဖွင့်ကြည့်ရတုန်း။း)
Whatever u write..I feel very pleased to enjoy it.
I m also very poor in cooking.:P